WRB - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ WRB
ကျယ်ပြန့်ဖယောင်းတိုင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ, သူတို့ကိုအကြားကွာဟချက်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကို enable.
အဆိုပါညွှန်ပြချက်ကတော့ WRB ကို detect နှင့်ခြေတစ်လှမ်း (ကျယ်ပြန့် Range ဘား) ကျယ်ပြန့်အဖွဲ့များနှင့်အတူသို့မဟုတ်မီးခွက်. WRBs သူတို့ကိုယ်သူတို့အသုံးဝင်သောမဟုတ်သောကြောင့်, အဆိုပါညွှန်ပြချက်လည်းထိုအအရက်ဆိုင်ပေါ်အခြေခံပြီးက hidden ကွာဟချက်ဆုံးဖြတ်သည်. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားဝပြောစွာနဲ့ unfilled ဝှက်ထားကွာဟချက်ကိုပြသ, ဒါကြောင့်သင်လျင်မြန်စွာလက်ရှိအခြေအနေရနိုင်. သင်တို့သည်လည်းစျေးနှုန်း unfilled ကွာဟမှုဧရိယာဝင်ရောက်အကြောင်းအသိပေးချက်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်.
UseWholeBars (ပုံမှန်အားဖြင့် = အယူမှား) — if စစ်မှန်တဲ့, ယင်းကျယ်ပြန့်ဘားဘို့ညွှန်ပြချက်ရှာဖွေမှုများကိုအစားကျယ်ပြန့်အဖွဲ့များ.
WRB_LookBackBarCount (က default = အားဖြင့် 3) - မည်မျှအရက်ဆိုင် WRB ဆုံးဖြတ်ရန်နှိုင်းယှဉ်ရန်. ဒီစျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မား, အဆိုပါအလွန်ရှားပါးတဲ့နှင့်ပိုပြီးသိသာ WRBs ဖွစျလိမျ့မညျ.
WRB_WingDingsSymbol (က default = အားဖြင့် 115) - WRBs သတ်မှတ်ပေးရန်စာသားကိုသင်္ကေတကုဒ်. ပုံမှန်အားဖြင့်, သေးငယ်တဲ့ rhombus ကိုအသုံးပြုသည်.
HGcolor1 (က default = clrDodgerBlue အားဖြင့်) - ပထမဦးဆုံး (နှင့်က default) ဝှက်ထားကွာဟမှုအရောင် rectangles.
HGcolor2 (က default = clrBlue အားဖြင့်) - ကိုဝှကျထားကွာဟမှုစတုဂံဘို့ဒုတိယအရောင်.
HGstyle (က default = STYLE_SOLID အားဖြင့်) - က hidden ကွာဟမှုစတုဂံပုံဆွဲဘို့လိုင်းစတိုင်.
StartCalculationFromBar (က default = အားဖြင့် 100) - WRBs အထိမ်းအမှတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဇယားသမိုင်းအတွက်ဘား၏နံပါတ်နှင့်က hidden ကွာဟချက်.
HollowBoxes (ပုံမှန်အားဖြင့် = အယူမှား) — if စစ်မှန်တဲ့, အဆိုပါဝှက်ထားကွာဟမှုစတုဂံဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲဖွစျလိမျ့မညျ.
DoAlerts (ပုံမှန်အားဖြင့် = အယူမှား) — စစ်မှန်တဲ့ turns on notifications about price enteringahidden gap area.
WRB တစ် Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
WRB သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
WRB.mq4 install လုပ်နည်း?
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ WRB.mq4 မိတ္တူ / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
WRB.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator WRB.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ WRB.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးBalance စစ်မှန်သော Range Indicator တွင် OBTR
Next ကိုဆောင်းပါးအစွမ်းသတ္တိ Indicator bounce 2.0 တန်ဂိုလိုင်းနှင့်အတူ